यी २२ वर्षीय युवकका ३ पत्नी, पत्नीहरूसँग मिलेर चौथो पत्नी खोज्दै ! [कारण थाहाँ पाउँदा दुनियाँ हैरान] – List Khabar
Home / रोचक / यी २२ वर्षीय युवकका ३ पत्नी, पत्नीहरूसँग मिलेर चौथो पत्नी खोज्दै ! [कारण थाहाँ पाउँदा दुनियाँ हैरान]
यी २२ वर्षीय युवकका ३ पत्नी, पत्नीहरूसँग मिलेर चौथो पत्नी खोज्दै ! [कारण थाहाँ पाउँदा दुनियाँ हैरान]
admin October 20, 2021 रोचक Leaveacomment 55 Views
भगवानका पालादेखिको तथ्य: महिला र पुरुषको मिलनमा कसलाई बढी आनन्द लाग्छ ? जान्नुहोस्
यस्ता म्यासेज पठाएर यि युवतीले कमाउँछिन् महिनाको डेढ लाख
काठमाडौं । विवाहलाई लिएर आजका मानिसहरु एकदम चनाखो बन्ने गरेको छन् । आजको युगमा जहाँ मानिसहरु विवाह पछि परिवारको नियन्त्रणमा जोड दिन्छन् । वर्तमान मूल्य वृद्धिको युगमा, पाकिस्तानका २२ वर्षीय अदनानको कथा अलिक फरक छ । उनले तीन विवाह गरेका छन, चौथो बिहेका लागि तयारी भइरहेको छ ।
पाकिस्तानी शहर सियालकोटका निवासी अदनानले २२ वर्षको उमेरमा तीन विवाह गरेका छन् र अब चौथोको तयारीमा छन् । अच्चमलाग्दो कुरा के छ भने ती अदनानको चौथो बिहेका लागि उनका तीन पत्नीहरू नै नयाँ सौता खोज्दैछन् । आज, मानिसहरूले विवाहलाई बेवास्ता गर्ने कोसिस गर्छन्, त्यसैले चौथो विवाहको कुरा आश्चर्यको रूपमा आएको छ ।
वास्तवमा, पाकिस्तानी युवा अदनान र उनका तीन श्रीमतीहरु र चार बच्चाहरूको कथा दैनिक पाकिस्तान ग्लोबल यूट्यूब च्यानमा अपलोड गरिएको एक भिडियोमा सबै प्रष्ट भएको हो । यो भिडियो एकाएक भाइरल भएको छ ।
सियालकोट निवासी अदनानको पहिलो विवाह १६ वर्षको उमेरमा भएको थियो । अब उनी चौथो बिहेका लागि तयारी गरिरहेका छन् । गत वर्ष अदनानले तेस्रो बिहे गरेका थिए । अदनानको दोस्रो विवाह २० वर्षको उमेरमा उनी कलेजमा हुँदा भएको थियो । उनका अहिले ४ सन्तान रहेका छन् ।
चाखलाग्दो कुरा के हो भने, अदनानका तीन पत्नीहरूको नाम अंग्रेजी वर्णमालाको एसबाट शुरू हुन्छ । अदनानको पहिलो श्रीमती शम्बुल, दोस्रो पत्नीको नाम शुबाना र तेस्रो पत्नीको नाम शाहीदा बताइएको छ । तीनजना अदनानका पत्नीहरू सँगै अब अदनानको चौथो बिहेका लागि युवती खोज्दैछन । चौथो युवतीको नाम पनि एसबाट शुरू हुनुपर्छ ।
सबैको दिमागमा चलिरहेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आजको मुद्रास्फीतिमा अदनानले तीन पत्नी र चार बच्चाहरूलाई कसरी पालिरहेका छन् । अदनानसँग यसको पनि उत्तर छ ।
अदनानका अनुसार ऊ आफ्ना तीन पत्नीहरूलाई खुशी राख्छन् । यूट्यूबमा अपलोड गरिएको भाइरल भिडियोमा अदनानले तीन पत्नीहरू आफुसँग धेरै नजिक रहेको बताएका छन् । किनकि उनलाई तीनै पत्नीले जहिले पनि समान प्रेम गर्दछन् ।
रोचक कुरा, यो देउरानी–जेठानी भएको घरमा बस्न प्रायः गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै एकदसेरका छोरा भए पनि अदनानका तीन पत्नीहरू वास्तविक बहिनीहरूको रूपमा बस्छन् । अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दा अदनानका तीन पत्नीहरू भन्छन् कि उनीहरू सबै मिलेर अदनानलाई खुशी पार्छन् र उनको सबै काममा योगदान दिन्छन् ।
अन्तर्वार्ताको क्रममा जब अदनानलाई तीन पत्नीहरूको आक्रोश बढ्यो भने के हुन्छ ? अदनान भन्छन् कि उनी यस विषयमा अत्यन्त भाग्यवान छन्, किनकि उनका तीन पत्नीहरू मध्ये एक जनाले पनि विवाद गर्दैनन् र एक अर्कासँग मिलेर बस्छन् ।
अदनान भन्छन कि उनकी पहिलो पत्नी शुम्बलले उनलाई दोस्रो बिहे गर्न दिइन् । दोस्रो श्रीमतीले शाहिदालाई तेस्रो बिवाह गर्न अनुमति दिएकी हुन् । अब ती तीनजना मिलेर चौथो बिहेका लागि एउटी केटी खोज्दैछन् ।
अदनान भन्छन्, ‘म वास्तवमा तीन पत्नीहरूको विवाह पछि बढेको छु र व्यापारमा नाम कमाएको छु ।’ चारजना बच्चाका बुबा अदनान स्पोर्ट्स कारहरू किनबेच गर्ने व्यवसायमा छन् ।
अदनानले तिनीहरू तीन जना पत्नीहरूसँगै किनमेल गर्न जान्छन् । अदनानका अनुसार ती तीन पत्नी र चार बच्चाहरूलाई पाल्न प्रतिमहिना डेढ लाख रूपैयाँ खर्च गर्छन ।
आफ्नो व्यबसायबाट यो सबै पुरा भइरहेको उनको दावी छ । कार किनबेचको मोलमोलाईमा तीन श्रीमती नै साथ लिएर जान्छन् । उनीहरुको मुस्कान, बोल्ने शैलीले नै व्यपार झनै फैलिरहेको छ । व्यपार राम्रो भइरहेको छ । सबै मिलेर खाइरहेका छन् भने बिबाह किन नगर्ने अदनान उल्टै प्रश्न गर्छन् ।
Previous श्रीमान विदेशवाट आउँछु भनेपछि भागेकी सिर्जना काठमाडौको कोठामा रंगेहात फेला परिन्, खाटमुनीवाट प्रहरीले यसरी निकाले (भिडियो हेर्नुस्)
Next झारफूक गर्छु भन्दै ३० वर्षकी महिलाको कोठामा मध्यरातमा गएर….
रातिमा देख्ने यस्ता अनेकौ सपनाहरुले भविष्यबारे बताउछ यस्तो संकेत, जानिराखौ!
हरेक व्यक्तिले सुत्ने समयमा केहि न केहि सपना देखेकै हुन्छ। सपना एक काल्पनिक घटना जस्तै …